Zaka tsara: filaminana no hampandroso… | NewsMada
Zaka tsara: filaminana no hampandroso…
Hanao ahoana ny ho tohin’ny toe-draharaham-pirenena? Mba hilamina tanteraka amin’izay… Firarian-tsoa amin’izao taona vaovao izao izay, indrindra amin’izao fitondrana vaovao izao. Efa niarahaba ny filohan’ny Repoblika vaovao ny kandidà tsy voafidy. Manaiky ny voka-pifidianana izany.
Ahoana kosa ny amin’ireo mpomba azy? Mba hahay hanaraka ny lehibe mpitarika azy amin’izany… Tsy handeha an-jambany izany, na asondrovaky ny hambom-po diso toerana. Fiovana andrandraina voalohany amin’izao ny firosoana amin’ny fifandimbiasam-pahefana mazava sy milamina.
Raha fitiavan-tanindrazana no mety mbola hampisisika ny sasany amin’ny fanoherana ny voka-pifidianana, takin’izay fitiavan-tanindrazana izay koa ny fitsinjovana ny fiainam-pirenena sy ny vahoaka. Kibo mitsara tena amin’ny safidiny ny tsirairay: ny korontana sa filaminana no hampandroso?